Indlu kaNomatse Tale
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKarin
Jonga kwaye uphumle ujikeleze isitovu somthi esipholileyo emva kosuku olumnandi. Yonwabela iimbono ezintle zeentaba kuzo zonke iikona. Ukuthuthuzela kuthetha yonke into kuthi. Ekhaya kude nekhaya. Ukwamkelwa ngokufudumeleyo kukulindile entliziyweni yeThe Highlands.
Ukuhamba ngebhayisekile ezintabeni okugqwesileyo, ukukhwela isikhephe, ukubukela iintaka, ukunyuka, ukutyibilika kunye neendlela ezingapheliyo zokuhamba intaba (ukusuka kulula ukuya kokunzima) zonke ziyafumaneka ukusuka emnyango wakho.
I-Squirrel's Tale Cottage ikwindawo entle, ephakamileyo embindini weCairngorms National Park, kwaye iyonwabela iimbono ezintle kulo lonke ilizwe elisingise kwintlambo yaseStrathspey, uMlambo iSpey kunye neeNtaba zeCairngorm ezimangalisayo. Le ndawo ithandekayo yenza iphiko labanini boBugcisa kunye neMisebenzi yeBanga B edweliswe kwiBroomhill House. Ifikeleleka ngokuqhutywa kwehlathi kunye neendawo zokuhlala phakathi kweehektare ezingama-25 zehlathi labucala, elingachithwanga kunye negadi ye-cottage egcinwe kakuhle, apho unokubukela ii-squirrels ezibomvu ezidlalayo kunye nentabalala yeentaka ezinqabileyo, ezinje ngokhozi lwegolide kunye ne-osprey. Le ndlu yelizwe yenza isiseko esifanelekileyo sokujonga le ndawo ithandekayo yeHighlands.
ulwazi lwabakhenkethi olukhoyo, abanini banolwazi ngeCairngorms National Park.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dulnain Bridge